IIMPAWU ZE-13 ZOMZALI ONETYHEFU ABANTU ABANINZI ABANGAZIQONDIYO - UKUBA NGUMZALI
Iimpawu ze-13 zoMzali onetyhefu abantu abaninzi abangaziqondiyo
Uninzi lwabazali benza konke okusemandleni abo ukubonelela abantwana babo ngendlela eyonwabisayo kunye nokukhula okunempilo, kodwa naba bantu banokuthi ngempazamo benze iimpazamo ezinokuthi zikhokelele kuqesho lonyango lwexesha elizayo.
Ngelishwa, abanye abazali badlulela ngaphaya kwempazamo kwaye babhenele kudidi olunetyhefu. Nokuba umzali unenjongo yokuba uyityhefu okanye akunjalo, zininzi iindlela zokuziphatha ezinokubangela umonakalo omkhulu ngokweemvakalelo nangokwengqondo emntwaneni de kuphele kubachaphazela nasemva kokuba sele bekhulile.
Ukuba ufumene nayiphi na kwezi meko zilandelayo njengomntwana, iingxaki ziphezulu ukuba omnye okanye bobabini abazali bakho ubuncinci banetyhefu.Intengiso
1. Bayasilela ukuKubonelela ngesiQinisekiso kunye noKhuseleko
Abanye abantu bakholelwa ukuba ukubonisa uthando olunzima yindlela ebalulekileyo yokuqinisekisa ukuba abantwana babo bayakwazi ukuzikhathalela kwixa elizayo. Ukuba ubunokufumana le ndlela rhoqo, unokukholelwa ukuba oku kube nefuthe elihle kubomi bakho. Nangona kunjalo, ukuba usilela ngokwenyani ngoku ngenxa yako nakuphi na ukungaphumeleli okanye ukwaliwa, ke oku kunokwenzeka kakhulu kusala ukwaliwa yityhefu komzali kukubonelela ngesixa esifanelekileyo sokhuseleko kunye nesiqinisekiso ngelixa wawumncinci. Uthando olunzima lunokusebenza ngamanye amaxesha, kodwa alunakuba kuphela kwendlela ayithathayo umzali ukuba ufuna umntwana wakhe abe ngumntu omdala ogqibeleleyo.
2. Zibaluleke kakhulu
Abazali bomntu wonke bagxeka amaxesha ngamaxesha. Ngaphandle kweli candelo, ngekhe sifunde ukwenza izinto ezininzi ngokufanelekileyo, ezinje ngemisebenzi yemihla ngemihla njengokuhlamba impahla. Umzali onetyhefu uyakuthabatha oku ngokugxeka ngokugqithisileyo ngayo yonke into ayenzayo umntwana. Abazali banokwenza impazamo yokukholelwa ukuba bayakwenza oku ukuqinisekisa ukuba abantwana babo bayakuphepha ukwenza iimpazamo ezinkulu. Ngelishwa, eyona nto ayenzayo le nto ibangela ukuba umntwana enze oko phuhlisa umgxeki wangaphakathi ongqwabalala Oko kunokuba ngumda okhubazekileyo ebudaleni.
3. Bafuna Ingqalelo Yakho
Abazali abanetyhefu rhoqo baguqule abantwana babo babe ngabazali babo endaweni yabazali babo ngokufuna ingqalelo yabo ngalo lonke ixesha. Oku kunokubonwa njengokumanyana phakathi komzali nomntwana, kodwa ngokwenene bubudlelwane beparasiti obufuna ixesha namandla omntwana kakhulu xa kufuneka egxile ekufundeni ezinye izakhono. Nangona kunokuba nzima ngamanye amaxesha, umzali ojikeleze kakuhle uya kuvumela abantwana babo indawo eyaneleyo yokukhula kwaye babe ngabantwana ngaphandle kokufuna ukuhlangana rhoqo ukuze bahambelane neemfuno zabo.Intengiso
4. Benza iziqhulo ezinetyhefu Ngawe
Ngamaxesha athile bonke abazali bayabakhetha abantwana babo, kodwa xa izinto ekuthiwa ziihlaya ziba yinto eqhelekileyo, oku kunokuba yingxaki enkulu. Akudingeki ukuba ulwamkele olu hlobo lokuziphatha kuba umzali wakho ehlala eqhula malunga nento efana nokuphakama okanye ubunzima bakho. Ekugqibeleni, eli licebo lokujongela phantsi elinokukwenza uzive ungalunganga malunga nesiqu sakho. Ukuba umzali unenkxalabo esemthethweni yokujongana nomntwana wakhe, kufuneka athembeke kwaye angagxeki, ngokuchaseneyo nokwenza iziqhulo ezikhohlakeleyo.
5. Zibangela ukuba Ucacise ihambo eyoyikekayo
Ngaba ukhule ukholelwa ekubeni umzali wakho wayekuxhaphaza ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo ngenxa yokuba kufanelekile? Ukuba kunjalo, usenokuthethelela ukungaziphathi kakuhle kwabanye ngeendleko zakho. Abazali abanetyhefu banokujija nayiphi na imeko ukuze ihambelane neemfuno zabo, kwaye oku kushiya abantwana bekhetha izinto ezimbini: yamkele ukuba umzali wabo uphosakele okanye ufake ityala kubo bonke. Kwiimeko ezininzi, abantwana, nkqu nabo bangabantu abadala ngoku, bakhetha le ndlela yokugqibela.
6. Abakuvumeli ukuba Uvakalise iimvakalelo ezingalunganga
Abazali abangafuni kukhulisa iimfuno zeemvakalelo zomntwana wabo kwaye benze ukukhanya kwiimvakalelo zabo ezingalunganga baseta ikamva apho umntwana aya kuziva engenakho ukuveza into abayifunayo. Akukho nto iphosakeleyo ngokunceda abantwana babone icala elifanelekileyo kuyo nayiphi na imeko. Nangona kunjalo, ukugatya ngokupheleleyo iimvakalelo ezingalunganga zomntwana kunye neemfuno zeemvakalelo zinako kukhokelela kuxinzelelo kwaye yenze kube nzima kubo ukuba baphathe ngokufanelekileyo ukungakhathali njengabantu abadala.Intengiso
7. Bayaboyikisa nkqu nabantwana babo abadala
Intlonipho kunye noloyiko akufuneki zihambe-ngesandla. Ngapha koko, abantwana abaziva bethandwa, baxhaswa kwaye banxibelelene kakhulu ngakumbi ukonwaba njengabantu abadala . Nangona uqeqesho lohlobo oluthile luza kubakho ngokufunekayo amaxesha ngamaxesha, abazali abangenayo ityhefu abayisebenzisi imisebenzi eyoyikisayo kunye namagama awonakalisa ngokusisigxina kwingqondo yomntu. Abantwana akufuneki boyike ukuba nentlonipho, kwaye abantu abadala akufuneki ukuba bagcine bexhalabile ngalo lonke ixesha umzali wabo ebiza okanye ethumela i-imeyile.
8. Basoloko Bebeka Iimvakalelo Zabo Kuqala
Abazali banokukholelwa ukuba iimvakalelo zabo kufuneka zize kuqala ngexesha lemicimbi yosapho, kodwa le yindlela yokucinga edala engazukukhulisa ubudlelwane obulungileyo. Nangona abazali kufuneka benze isigqibo sokugqibela malunga nayo yonke into ukusuka kwisidlo ukuya kwizicwangciso zeholide, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo iimvakalelo zelungu ngalinye losapho- kubandakanya nabantwana. Abantu abanetyhefu bahlala benyanzela abantwana ukuba bacinezele ezabo iimvakalelo zabo ukuze bakholise abazali babo.
9. Banokukhetha-iinjongo zakho
Ngaba omnye wabazali bakho unomdla kuyo yonke into oyenzayo ukuya kwinqanaba lokuba bathathe indawo okanye bakwenze ikopi? Oku kunokubonakala njengezenzo zomntu onomdla kubomi bomntwana wakhe, kodwa into eqhele ukuyenza yenza ukuba kube nzima emntwaneni ukuba afezekise iinjongo zabo. Umzekelo, ukuba kuya kufuneka uthengise iibhokisi ze-cookies ezingama-50 ngaxeshanye xa umama wakho ethatha isigqibo sokwenza ii-cookies kwaye azigqithisele kubamelwane, kuya kuba nzima kakhulu ukubetha injongo yakho yokuthengisa. Le ndlela yokuziphatha inokukuphazamisa kubomi bakho bonke ukuba uvumela umzali wakho ukuba aqhubeke nokubaleka.Intengiso
10. Basebenzisa Ityala Nemali Ukulawula Wena
Wonke umntwana ufumene uhambo lokuziva enetyala evela kubazali bakhe, kodwa abantu abanetyhefu babhenela kweli qhinga rhoqo. Nokuba umdala, umzali wakho usenokukulawula ngokukunika izipho zexabiso kwaye ulindele into eza kumbuyekeza. Ukuba uyasilela ukwenza njengoko bafuna, baya kuzama ukukwenza uzive unetyala ngako konke abakwenzele kona. Abazali abasempilweni bayazi ukuba abantwana abanatyala kubo impendulo ethile ngokutshintshela imali okanye izipho, ngakumbi xa ezi zinto bezingacelwanga kwasekuqaleni.
11. Baninika uXolo
Kunokuba nzima ukuthetha nomntu xa unomsindo, kodwa ukuvala umntwana ngaphandle kokuthula kungonakalisi kwaye akukakhuli. Ukuphelisa le mpatho-ndlongondlongo kulimaza naluphi na uhlobo lobudlelwane kwaye kwenza ukuba umntu owamkelayo azive enyanzelekile ukuba ayilungise le meko, naxa bengakhange benze nto imbi. Ukuba umzali uphambene kakhulu ukuba angancokola ngokusengqiqweni, kuya kufuneka bazithethelele okwexeshana endaweni yokungahoyi umntwana wabo.
12. Bayikhathalele iMida eseMpilo
Abazali banokuzithethelela ngokugcina iliso elibukhali ebantwaneni babo kwaye, kwiimeko ezithile, kusenokude kube yimfuneko ukuba benze nje kancinci ukubagcina bekhuselekile. Nangona kunjalo, wonke umntu kufuneka akwazi ukuzibekela imida, ngakumbi ulutsha. Abazali abanetyhefu bayigqitha le mida macala onke, kwaye oku kubangela iingxaki ezininzi. Umzekelo, umzali onetyhefu uya kumvulela umntwana wakhe umnyango engakhange ankqonkqoze kuqala. Oku kuseta iphethini eyenza ukuba kube nzima kubantwana babo ukuba baqonde ngokufanelekileyo kwaye baqonde imida kamva ebomini.Intengiso
13. Benza ukuba ube noxanduva lolonwabo lwabo
Ukuba omnye wabazali bakho uchithe ixesha elininzi ekuxelela ukuba bancama malini ngenxa yakho ukungonwabi kwabo, babeka ulindelo olungeyonyani kwindima yakho ebomini babo. Akukho mntwana kufuneka aphenduliswe ngolonwabo lomzali wakhe. Kananjalo, abazali akufuneki bafune ukuba abantwana bancame izinto ezibenza bonwabe ukuze baphume amanqaku. Ukunyanzelwa kule meko kuya kwenza kube nzima kubantwana abadala ukuba baqonde ukuba sonke sinoxanduva lolonwabo lwethu.
Ukususa abantu abanetyhefu ebomini bakho kusenokubonakala kungenakwenzeka, ngakumbi ukuba omnye wabo ngumzali. Ngaphandle kokuba uthathe inyathelo, nangona kunjalo, kuya kuba nzima kakhulu ukulungisa umonakalo ngokweemvakalelo nangokwengqondo owenziwe kuwe ngexesha lobuntwana bakho. Kwicala lokudibanisa, nawuphi na umzali onetyhefu oziqondayo ngaphakathi kwamanqaku ali-13 akweli nqaku angaya kumcebisi oqeqeshiweyo ngoncedo lokophula iipateni zabo zokuziphatha ezingalunganga.
izithethe zonyaka omtsha kwihlabathi liphela
eyona ncwadi ibalulekileyo yokufunda
Kufuneka afunde iincwadi ngalo lonke ixesha
umthambo ojolise kumanqatha ngasemva
wazi njani ukuba wadibana nomphefumlo wakho
ukubeka isilungisi kwizinwele ezomileyo
indlela yokuphalaza ubunzima bamanzi
Impumelelo Kwikhondo Lomsebenzi Indlela Yokuphila Oyithandayo Abantu Kubudlelwane Unxibelelwano Ngolonwabo Isilwanyana Sentlalo